ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ "လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။" ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ Facebook ကနေ မေးတာလဲ ပြန်ရှာရတာမလွယ်လို့ အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ ဆေးပညာစာတွေ ဖတ်လိုပါရင် မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။- http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဆေးပညာစာများ- http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ- http://yamuna-online-clinic.blogspot.in ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://my-sayawun-life.blogspot.in/ ဆရာဝန်ဘဝ အမှတ်ရတာတွေ - http://dts-political-page.blogspot.in/ နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ- http://yamunaclinic.org/ ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://facebook.com/tint.swe.dr Facebook Sunday, June 21, 2009
ဗက်တီးရီးယားများကို အမျိုးအစားခွဲရန်၊ (ဂရမ်)ဆိုးဆေးဆိုးပြီး မိုက်ခရိုစကုပ်နှင့် ကြည့်လျှင် မတူသော အရောင်များကို မြင်ရသည်၊ (ဂရမ်-နက်ဂေးတစ်ဖ်)နှင့် (ဂရမ်-ပေါ့ဇေးတစ်ဖ်)ဟုရှိသည်။ ပုံသဏ္ဌာန်လည်းမတူကြ၊ (ရော့တ်)သည် အချောင်းသဏ္ဌာန်ရှိ၍ (ကော့ကိုင်း)သည် အလုံးအဝိုင်း ဖြစ်သည်။ Type of Bacteria ပိုးအုပ်စု၊ Name of Bacteria ပိုးအမျိုးအစား Medicine ကုသရန်ဆေး၊ (ဂရမ်-နက်ဂေးတစ်ဖ်) (ကော့ကိုင်) ဂိုနို-ကော့ကပ်စ် Cefixime (200-400 mg Daily Oral),
Ofloxacin (300-400 mg BD Oral or IV) (ဂရမ်-နက်ဂေးတစ်ဖ်) (ကော့ကိုင်) (မနင်ဂို-ကော့ကပ်စ်) Penicillin (85.710 to 171.42 mg IV/IM Daily) (37.5 mg/kg IV/IM QID); Cefotaxime (1-2 Gm/dose BD IV/IM); Ampicillin (250-500 mg QID Oral or 500-1000 mg QID IV/IM); Chloramphenicol (500-1000 mg QID Oral/IV) ဂရမ်-ပေါ့ဇေးတစ် ကော့ကိုင်း စထွက်ပတို-ကော့ကပ်စ်၊ နူမိုကော့ကပ်စ် Penicillin (85.710 to 171.42 mg IV/IM Daily) (37.5 mg/kg IV/IM QID) ဂရမ်-ပေါ့ဇေးတစ် ကော့ကိုင်း (စတက်ဖလို-ကော့ကပ်စ်) Gentamycin (1.5 mg/kag/dose BD/TDS Oral or 1-2.5 mg/kg/dose TDS IV/IM), Rifampin (15 mg/kg Oral), Penicillin (85.710 to 171.42 mg IV/IM Daily) (37.5 mg/kg IV/IM QID) ဂရမ်-ပေါ့ဇေးတစ် ကော့ကိုင်း (အင်တရို-ကော့ကပ်စ်) Ampicillin (250-500 mg QID Oral or 500-1000 mg QID IV/IM), Gentamycin (1.5 mg/kg/dose BD/TDS Oral or 1-2.5 mg/kg/dose TDS IV/IM) (ဂရမ်- နက်ဂေးတစ်ပ်) (ရော့တ်) (အီး၊ ကိုလိုင်)၊ (ဘရူဆဲလား)၊ ဟီမိုဖဲလပ်စ်၊ ရှီဂဲလ်လား၊ Clindamycin (150-450 QID Oral or 300-600 mg QID IV/IM),
Metronidazole (400 mg TDS Oral), Tetracycline (250-500 mg QID Oral), Rifampin (15 mg/kg Oral), Erythromycin (250-500 mg QID Oral), Amoxicillin (0.5-1.0 G TDS Oral/IV/IM) (12.5 mg/kg TDS Oral), Ampicillin (250-500 mg QID Oral or 500-1000 mg QID IV/IM), Streptomycin (15 mg/kg IM) (ဂရမ်-ပေါ့ဇေးတစ်ပ်) (ရော့တ်) ကလော်စရိုက်ဒီယမ်၊ အင်ဿးရက်စ်ပိုး၊ Penicillin (85.710 to 171.42 mg IV/IM Daily) (37.5 mg/kg IV/IM QID), Erythromycin (250-500 mg QID Oral), Ampicillin (250-500 mg QID Oral or 500-1000 mg QID IV/IM) (အက်စစ်-ဖတ်စ်) (ရော့တ်) သို့ မဟုတ် (ဗက်ဆလိုင်)၊ (တီဘီ)ပိုး၊ INH (300 mg OD Oral), Rifampin (15 mg/kg Oral), Pyrazinamide (20-30 mg/kg Daily Oral), Ethanbutol (15-25 mg/kg Daily Oral), Streptomycin (15 mg/kg IM) စပိုင်ရို-ချက်စ် (ဆစ်ဖလစ်ပိုး) Penicillin (85.710 to 171.42 mg IV/IM Daily) (37.5 mg/kg IV/IM QID) Medicine for Diseases of GI Tract
Disease/Illness Treatment ဝမ်းလျောခြင်း၊ Diphenoxylate (Lomotil)5mg TDS for adult; For children 0.166 mg/kg TDS ခရီးသွားဝမ်းလျောခြင်း၊ Fluoroquinolones, e.g. Ciprofloxacin 500 mg Ofloxacin 400 mg Norfloxacin 400 mg BD; Trimethoprim-Sulfamethoxazole 160/800 mg BD; Erythromycin 250-500 mg QID; Metronidazole 250 mg TDS Bacillary Dysentery, Diarrhea caused by E-coli, Salmonella, Shigella, Giardia, Traveler's diarrhea (ဗက်ဆလရီ) ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ ခရီးသွားဝမ်း ပျက်ခြင်း-ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ Furazolidone 25-50 mg QID Amebic Dysentery (အမီးဘားပိုး)ကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ Metronidazole 500-750 mg TDS x 10 days or Tinidazole 800 mg TDS x 3-5 days (plus) Diiodohydroxyquin 650 mg TDS x 21 days or Paromomycin 25-30 mg/kg (max.3Gm) in divided doses after meal x7days Shigella Dysentery (Shigellosis) (ရှီဂဲလား- ဘက်တီးရီးယား)ကြောင့် ဝမ်းပျက် ခြင်း-ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ TMP-SMZ 160/800 mg BD x 7-10 days or Ciprofloxacin 750 mg BD x 7-10 days Food Poisoning and Traveler’s Diarrhea အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ခရီးသွားဝမ်း ပျက်ခြင်း၊ Clostridium = Vancomycin, Metronidazole; E. Coli and Salmonella = Fluoroquinolone ; Yersinia = Tetracycline or Gentamycin Giardiasis (ဂိုင်ယာဒီးယား)ပိုးဝင်၍ ဝမ်း ပျက်ခြင်း၊ Tinidazole2Gm stat or Metronidazole 250 mg TDS x 5-7 days or Furazolidone 100 mg QID x 7-10 days or Quinacrine 100 mg TDS PC x 5-7 days or Albendazole 400 mg daily x5days Gastroenteritis (GE) အစာလမ်း(အူ)ရောင်ခြင်း၊ For Salmonella TMP-SMZ double strength BD x5days or Ampicillin 500 mg QID x5days or Ciprofloxacin 500 mg BD x5days or For E histolytica Metronidazole 750 mg TDS x 5-10 days followed by Diiodohydroxyquin 600 mg TDS x3weeks Posted by